Steam: Community Client, fivarotana ary lalao ho an'ny GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
Rehefa avy nandeha namaky ny fampiharana lalao video ho an'ny GNU / Linux, toa ny GameHub, Itch.io y Lutris, lojika raha tsy mijanona ny fanehoan-kevitra momba ny vaovao nohavaozina momba ny fanta-daza, ampiasaina ary feno sehatra (Community / Store / Customer) for lalao ao amin'ny GNU / Linux, izany hoe, Steam.
Eny, Steam dia ho an'ny maro, ny tsara indrindra amin'ny rehetra sehatra fizarana lalao video nomerika. Ambonin'izany rehetra izany, noho izy anisan'ny orinasa malaza manerantany, izay mampivelatra ny lalao sy ny filalaovana kilalao, nantsoina Valve.
Misaotra an'io fanohanana io, Steam ankehitriny dia toerana misy ny mpampiasa (mpikambana / mpanjifa) afaka mividiana sy misintona lalao marobe, avy amin'ny mpanamboatra samihafa (developer software), misy ao aminao katalaogy goavambe sy mitombo. Ankoatr'izay, afaka mankafy serivisy sy tombontsoa hafa.
1.1 Ahoana ny fiasan'ny Steam?
1.2 Ahoana ny fametrahana sy fampiasana Steam amin'ny GNU / Linux?
Ahoana ny fiasan'ny Steam?
Mahatakatra sy mampiasa Steam mora be izany. Ankoatry ny fampiasana lalao maimaim-poana, maimaim-poana na misokatra, izay azo atolotra tsy misy fetra, amin'ny ankapobeny, rehefa mividy lalao ao, ny zavatra novidinao dia famandrihana ho azy, izany hoe famandrihana tokana (manokana sy tsy azo afindra) azo idirana amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny kaontinao.
Steam tsy manome kopia ara-batana na lalao na oviana na oviana. Na izany aza, mamela ny famoronana kopia azy amin'ny medium ara-batana izy io aorian'ny fisintomana. Lalao izay mifamatotra hatrany amin'ny kaontin'ny mpampiasa, hahafahan'izy ireo misintona, mametraka ary mampiasa azy io imbetsaka araka izay heverin'izy ireo fa ilaina, ary amin'ny solosaina takian'izy ireo, tsy misy fetrany, afa-tsy ny manomboka azy amin'ny solosaina iray isaky ny mandeha fotoana, ho afovoan'ny kaontinao.
Misy etona amin'ny alàlan'ny tranokala ofisialy, izay anisan'ny zavatra maro, ny mpitsidika dia afaka misoratra anarana ho anisan'ny fiaraha-monina, tsidiho ny fivarotana mividy sy / na misintona lalao ary misintona ny Mpanjifa lalao, ho an'ny tsirairay avy Operating System napetraka ao amin'ny solosainao.
Ahoana ny fametrahana sy fampiasana Steam amin'ny GNU / Linux?
Currently, the Mpanjifa lalao etona misy ao amin'ny endrika .deb, ao amin'ny 1.0.0.61 version. Alohan'ny misintona sy mametraka azy amin'ny a Rafitra miasa, raha ny ohatra asehontsika, a MX Linux 19.1, fizarana miorina amin'ny DEBIAN 10.3, torohevitra ny hisoratra anarana amin'ny sehatra Internet aloha. Tsotra ny fomba fiasa ary toy izao manaraka izao:
Mandrosoa tranokala ofisialy ho an'ny fisoratana anarana amin'ny kaonty sy / na fidirana.
Sintomy sy apetraka avy amin'ny mpanjifa Steam Games.
Fanombohana voalohany ny Steam Game Client ho an'ny fanavaozana anao sy ny fanahafana farany anao.
Fampiasana ny magazay ho an'ny fametrahana sy ny fihazakazahana lalao misy.
Araka ny hitanao, ny fisoratana anarana ao amin'ny Sehatra etonatoa ny misintona, mametraka, mametraka ary mampiasa ny sasany amin'ireo lalao maimaim-poana (Maimaimpoana-milalao) na mandoa (ara-barotra) Tsy sarotra velively izany, ary amin'ny ankapobeny dia miankina amin'ny fitaovan'ny solosaina ampiasaina sy ny mifanentana amin'izany ny zava-drehetra GNU / Linux Distro manampy Steam sy ny fitakiana azy manokana, ary ny fepetra takiana amin'ny lalao hampiasaina.
Mialà sasatra, na amin'ny Steam, GameHub, Itch.io y Lutris, na rindranasa hafa ho an'ny videogames toy ny emulator console retro na ny lalao birao tsirairay, dia aseho izany izao GNU / Linux dia tsara Rafitra fiasan'ny gamer miaraka amin'ny ambaratonga tena akaiky ny an'ny Windows sy MacOS.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Steam» tena tsara sy angano sehatra ho an'ny mpilalao iray ihany izy rehetra, satria a Fiaraha-monina, fivarotana ary mpanjifa kilalao multiplatform, miaraka amina katalaogy tsara sy lehibe ary mitombo «Juegos compatibles» Ho antsika Rafitra miasa malalaka sy misokatra, dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Steam: Community Client, fivarotana ary lalao ho an'ny GNU / Linux
Raha mivarotra programa ianao dia tokony hanohana programa ao Proton
Azoko tsara fa raha mividy lozisialy amin'ny alàlan'ny Steam ianao dia afaka miditra ao aminy, ka raha Linux isika, dia azo inoana fa Proton no ampiasaina hanohanana azy.
Tonga miaraka amin'ny safidy hampavitrika Proton
Mamaly an'i vicente
Manjaro Linux 19.0 "Kyria" tonga miaraka amin'ny Linux 5.4, Xfce 4.14, KDE 5.17, Gnome 3.34 ary maro hafa